कस्तो आयो यो मान्छेदेखि मान्छे डराउने युग | Ekhabar Nepal
कस्तो आयो यो मान्छेदेखि मान्छे डराउने युग
बिचार चैत्र १५ २०७६ ekhabarnepal
कोरोना भाइरसले मानिसलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्न सकिन्न । यसले कस्तो भयावह सृजना गर्ने हो भनेर अनुमान गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । तर, एउटा विचित्रको अवस्था भने आएको छ । मान्छेदेखि मान्छे डराउने ।
मान्छे सामाजिक प्राणी हो भनेर पढ्ने गरेको आजसम्मको अवस्थालाई हेर्दा कतै यो परिभाषानै फेरिने त हैन ? यही परिवेशमा अवको भविष्य कस्तो होला ?
यद्यपि मान्छेदेखि मान्छे डराउने अवस्था नेपालका लागि नयाँ हैन । पत्रकार मोहन मैनालीले माण्ठादेखि माण्ठा डराउने युग भनेर एउटा पुस्तकनै लेखेका छन् । माओवादी युद्व कालमा उनले भोगको अवस्थालाई सुन्दर शब्दमा उतारेर तयार गरेको पुस्तक असाध्यै मिठो छ ।
अहिले ठिक त्यस्तै परिवेश आएको छ । उही रुपमा हैन, रुप फेरेर । मान्छे चोला फेरेर अर्को जुनीमा आउँछ भन्थे समय पनि त्यस्तै रहेछ । हरेक कुराको विकल्प दिने वैज्ञानिकहरु यतिवेला दुला पसेका छन् । दुला पस्नुको अर्थ भागेको अर्थमा हैन खोजका लागि हो । तर, के गर्नु उनीहरुको वाली अवरुद्व छ वरु ज्योतिषीलाई सोधे केही जवाफ आउला कि ?
यस्तै भविष्यवाणी गर्ने ‘‘इन्ड अफ डेज्ः प्रिडिक्सन एन्ड फ्रोफिसेस अबाउट दी इन्ड अफ दी वल्र्ड’ पुस्तककी लेखक सिल्भिया ब्राउनको चर्चा छ । सन् २००८को गर्मीयामतिर दाबी गरिएको उनको ‘अशुभ भविष्यवाणी’ यस्तो रहेछ—
‘उपलब्ध उपचार विधिले काम नगर्ने, फोक्सो र श्वासनलीमा आक्रमण गर्ने एक गम्भीर निमोनियाजस्तो रोग करिब सन् २०२० तिर विश्वभर फैलिने छ,’
‘रोगभन्दा चकित पार्ने तथ्य यो हुने छ कि यो जसरी आएको थियो, यो त्यसरी नै अचानक गायब हुने छ । १० वर्षपछि फेरि आक्रमण गर्नेछ र त्यसपछि पुरै हराउने छ ।’
ती भविष्यवाणी गर्ने लेखक ब्राउनको सन् २०१३ मा मृत्यु भयो । तर, कोरोना भाइरसको महामारीले उनको पुस्तकले संसारभरिकै ध्यान आकर्षित गराएको छ । यसको ‘हार्ड कपी’ सयौं डलरमा बिक्री भइरहेको छ । अमेजोनको ‘नोटिफिसेसन चार्ट’मा दोस्रो नम्बरमा छ ।
उनी जीवितै छँदा उनको प्रसस्तै आलोचना भएको रहेछ । उनले गरेको यो भविष्यवाणी मिल्यो या मिलेन तर उनले आफ्नैवारेमा गरेको भविष्यवाणी अुसार ८८ वर्षको उमेरमा मर्नुपर्नेमा ७७ वर्षमै मरिछन् ।
जे होस् अहिलेको चोला फेरिदा धेरै कुरा फेरिने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसवाट सम्भवतः मानिसका चिन्तन प्रणालीहरु पनि फेरिने छन् ।
यसैवीच कोरोना भाइरस प्रकोपको अध्ययन गरिरहेका ब्रिटेनका वैज्ञानिकहरूले दशौँ लाख मानिसको ज्यान जोगाउने हो भने सरकारहरूले अत्यन्त चाँडो गतिमा कदम चाल्नु पर्ने बताएका छन् ।
इम्पेरियल कलेज लन्डनले गरेको अध्ययन अनुसार परीक्षण र एक्ल्याउने काम नगरे अनि सामाजिक दुरी कायम नराखे ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूको ज्यान जान सक्छ । यद्यपि यो कुरा भन्न कुने वैज्ञानिक हुनु पर्दैन ।
बीबीसीका अनुसार कम्प्युटर प्रणालीबाट निकालिएको हिसाब अनुसार अत्यन्त खराब स्थितिमा सघन उपचार आवश्यक पर्ने बिरामीहरूको सङ्ख्या धान्न सकिने भन्दा २० गुना ज्यादा हुनेछ ।
युरोपको रोग नियन्त्रणसम्बन्धी एउटा निकायले बढी उमेरका मानिसभन्दा पनि धेरै धूम्रपान गर्नेहरूमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको वढी रहेको हुनसक्ने बताएका छन् । तर, यो नै अन्तिम सत्य भने हैन ।
उपाय लकडाउनको पालनानै हो
सिङ्गापुरमा एक मिटर अर्थात् साढे तीन फिटको दुरी नराखेमा १० हजार डलर अथवा ६ महिना जेल वा दुवै सजायँ गर्ने ब्यवस्था भएछ । आज विहानसम्म ६८३ जना संक्रमित र १७२ जना निको भएर घर फिर्ता भएका छन् । अहिलेसम्म २ जनाको मृत्यु भएको छ । यो अवस्थामा राज्यले अलि कडाई गर्नुपर्ने अवस्था आएको होला ।
इटाली धेरै हदसम्म ध्वस्त भयो । अत्यधिक मानिस मर्ने अवस्था आयो । त्यसैले त्याहाँ पनि घर वाहिर निस्के ५ वर्षसम्म जेल हुने ब्यवस्था गरियो ।
अमेरिका आजैदेखि अलि ठाउँमा आएको छ । राष्ट्रति डोनाल्ड ट्रम्प हिजोसम्म “चाइनिज भाइरस” वा “वुहान भाइरस”भनेर खिसीट्यूरी गर्ने अवस्थावाट आज ठिकै ठाउँमा आइपुगेका छन् । आजमात्र उनले कोरोना भाइरस भनेर वोले र चिनियाँ राष्ट्रति सी जिनपिङ्गसंग वार्तासमेत गरे ।
तर, उनी त्यसै यो ठाउँमा आएका हैनन् । यसपछि मैले न्यूयोर्कवाट प्रकाशित खसोखास डट कम हेरें । स्थिति डर लाग्दो छ । “यसकारण न्युयोर्क बन्यो कोरोनाको नयाँ इपिसेन्टर” शीर्षकको समाचार अनुसार विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या सबैभन्दा धेरै भएको मुलुक अमेरिका बन्यो । त्यसमा पनि न्युयोर्क राज्यको न्युयोर्क सिटी नयाँ इपीसेन्टर बनेको छ । न्युयोर्क सिटी अमेरिकाको सबैभन्दा घनत्व भएको र ठूलो सिटी हो ।
शिकागो र फिलाडेल्फियाको भन्दा दोब्बर तथा लस एन्जलसको भन्दा तेब्बर ८ मिलियन भन्दा धेर जनसंख्या औषतमा एक बर्गमाइल क्षेत्रमा २७ हजारको बसोबास रहेको क्षेत्र न्यूयोर्क हो । न्युयोर्कमा निजी गाडीभन्न्दा सार्वजनिक गाडीको सुविधा वढी छ । यो मैले पनि ब्यहोरेको छु ।
न्युयोर्कमा यति धेरै फैलनुमा विद्यालयहरु बन्द गर्न, सामाजिक जमघटहरु रोक्न, भेलाहुनमा रोक्न ढिलाई हुनु मुख्य कारण मानिएको छ । मार्च २२ मा १५ हजार भन्दा धेरैमा संक्रमण भएपछिमात्र घरमा बस्न आदेश दिइयो ।
यस अर्थमा कुनै पनि हालतमा ढिला ढाला वा हेलचेक्राइ गर्नु आत्महत्या गर्नु हो भन्ने कुरा वुझ्न आवश्यक छ ।
बुटवलमा आजदेखि टोल विकास सस्थाहरुले आ—आफ्नो टोलमा प्रवेश निषेध गरेका छन् । यो राम्रो कुरा हो । धेरै ब्यक्तिले सामाजिक सञ्जालवाट कसैलाई घरवाट ननिस्कन प्रेरित गरेका छन् । यो अनुभूति हुनु ज्यादै राम्रो पक्ष हो ।
टोल विकास सस्थाहरु नेपालकै सन्दर्भमा असाध्यै उपयोगी सावित भएका छन् । विसं २०५४ सालदेखि गरिवी न्यूनिकरणका लागि सहयोगी हुने सोंचेर यसको सुरुवात गरिएको थियो । बुटवलमा शुरु गर्दा भोजप्रसाद श्रेष्ठ प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । यसको सोंचसम्वन्धी सवै कुरा मलाई थाहा हुने कुरा भएन । त्यसैले आजै मैले मेरो छिमेकमा वस्ने बुटवल उपमहानगरका वरिष्ठ अधिकृत रामप्रसाद अर्याललाई फोन गरेर जानकारी लिएं ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम ( यूएनडीपी), संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव वसोवास केन्द्र ( युएनसीएचआर), राष्ट्रिय योजना आयोग, स्थानीय विकास र भौतिक योजना मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा यसको अवधारणा ल्याइएको रहेछ । २०५५ सालमा १२ वटा नगरपालिकामा पहिलोपटक शुरुवात गरियो ।
सीप, संगठन र वचत गर्ने मुख्य काम यसका थिए । यो कार्यक्रम गाउँनगर साझेदारी (रुप) मार्फत गरिएको थियो । यसको मुख्य अवधारणा भनेको गाउँको उत्पादन सहरमा ल्याउने र सहरको प्रविधि, वीउ, मल गाउँ लैजाने भन्ने थियो । यसो गर्दा गाउँ र सहरलाई जोड्न सहज हुने भयो । पछि यसलाई २६ वटा नगरपालिकामा विस्तार गरियो र अहिले देशैभरी लागु गरिएको छ ।
नेपालमा यसको सफल प्रयोग भएपछि अहिले कम्वोडियामा पनि लागु गरिएको रहेछ । नेपालका लागि यो खुशीको कुरा हो । यीनले सुशासन प्रवद्र्वनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याएको पाइन्छ । अहिले सवै काम टोल विकास समितिमार्फत हुने गर्छन् । धारा पानी जोड्न पनि यीनको सिफारिस आवश्यक हुन्छ । जनतालाई चिन्ने भनेको टोल विकास समितिका नेताले हो । जनप्रतिनिधिले हैन । हरेक सूचना लैजाने माध्यम यीनै हुन् ।
यस कारणले पनि हुनुपर्छ अस्ति वुधवार मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै टोल विकास समितिहरुलाई अनुरोध गर्दै भनेका थिए—सहरी आवास क्षेत्रका टोल विकास सस्थाले स्थानीय सुरक्षा निकायको सहयोगमा आफ्नो टोलभन्दा वाहिरको ब्यक्तिलाई आउनवाट रोकौं । खाद्यान्न र तरकारीको व्यवस्था टोलकै पसलहरुमा मिलाऔं । कोराना भाइरसवाट जोगिन सामाजिक र ब्यक्तिगत दुरीलाई निरन्तर कायम राखौं । अत्यावश्यक कामका लागि वाहिर वानुनै परेमा स्थानीय सुरक्षा निकायको अनुमति लिएर मात्र जाऔं ।
वुधवार मुख्यमन्त्रीले गरेको अपिललाई शुक्रवारसम्म आइपुग्दा लागु गरेको पाइएको छ । ढिलै भएपनि यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
रुपन्देहीमा पहिलोपटक तिलोत्तमा नगरपालिकाले दैनिक ज्यालादारीमा मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरुलाई खाद्यान्न उपलव्ध गराउने निर्णय गरेर सवैलाई वाटो देखाउन अगुवाई गर्यो । उसले यो निर्णय वुधवारनै गरेको थियो । आज खाद्यान्न वितरण गरेरै नमुना प्रदर्शन गर्यो ।
तिलोत्तमाले टोल विकास संस्थाहरुको सिफारिशमा खाद्यान्न उपलव्ध गराउन थालेको हो । विपन्न परिवारलाई १० किलो चामल, २ किलो दाल र एक किलो नुन वितरण गरेको छ । यो सत्प्रयासलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । एकैदिनमा करिव एकसय विपन्न घरपरिवारलाई खाद्यान्न उपलव्ध गराएको छ । नगरका १७ वटा वडामा करिब ८ सय अति विपन्न परिवार रहेको अनुमान गरिएको छ । यो सिको अन्य छिमेकी नगरपालिकाहरुले पनि गर्दैछन् ।
त्यस्तै बुटवलमा लायन्स क्लव अफ बुटवल युथले दैनिक ज्याला मजदुरी गरि खाने गरिव तथा बिपन्न परिवारलाई खाद्यान्न बितरण गरेको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ शिवालय मन्दिरमा त्यसै आसपासका सुकुम्बासी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ५० परिवारलाई चामल, दाल र नुन वितरण गरिएको समाचारले सवैलाई उत्प्रेरित गर्नसक्छ ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका काममा क्लवले सहयोग र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउँदै सरकारलाई आवश्यक परेमा स्वयम् सेवकको भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको सन्देशसमेत दिनु स्वागतयोग्य कुरा हो ।